သောသီခို: သံလွင်မြစ် ရေကာတာစီမံကိန်းများ ရပ်တန့်ရန် KRW မှ လက်မှတ်တစ်သိန်းကျော် ကောက်ခံနေ
သံလွင်မြစ် ရေကာတာစီမံကိန်းများ ရပ်တန့်ရန် KRW မှ လက်မှတ်တစ်သိန်းကျော် ကောက်ခံနေ
ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၈ရက်၊ ၂၀၁၄ခုနှစ်။ စောထွန်းလင်း
သံလွင်မြစ်ပေါ်တွင် တည်ဆောက်မည့် ရေကာတာစီမံကိန်းများ ရပ်တန့်ရေးအတွက် ပြည်တွင်း၌ အများပြည်သူ၏ သဘောတူ လက်မှတ်တစ်သိန်းကျော်ကို ဖေဖေါ်ဝါရီလဆန်းပိုင်းမှစ၍ မတ်လ ၁၄ရက်အထိ ကောက်ခံလျှက်ရှိသည်ဟု ကရင်မြစ်ချောင်း များစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့(KRW)က ပြောသည်။
ယင်းသို့ကောက်ခံရရှိသည့် လက်မှတ်များကို အသုံးပြု၍ မြန်မာ၊ တရုတ်နှင့် ထိုင်းကုမ္ပဏီများ၊ စီမံကိန်းအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့် နိုင်ငံ၊ ကုမ္ပဏီနှင့် နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ မြန်မာအအစိုးရနှင့် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ အား သံလွင်မြစ်ပေါ်တွင် အန္တရာယ်များပြီး ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများစေမည့် အကြီးစားရေကာတာ တည်ဆောက်ခြင်းများကို မလုပ် ဆောင်ရန်အတွက် တိုက်ပွဲဝင် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ရည်ရွယ်ကြောင်း KRW ၏ ပြောခွင့်ရသူ စောသာဘိုးက ပြောသည်။
“ဒီရေကာတာစီမံကိန်းက ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘူး။ မငြိမ်းချမ်းသေးတဲ့ နယ်မြေတွေမှာ တည်ဆောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ပြည် တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုလည်း ထိခိုက်နိုင်တယ်။ ဒေသခံနဲ့ နိုင်ငံအတွက်ပါ ဆိုးကျိုးသာ ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အတွက် စီမံကိန်းရပ်ဆိုင်းဖို့ အခုလို လုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်”ဟု စောသာဘိုးက ဆိုသည်။
တရုတ်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် သံလွင်မြစ်ပေါ် တည်ဆောက်သွားမည့် ရေကာတာ ၆ခုမှ ထွက်ရှိလာသည့် လျှပ်စစ် ဓါတ်အားထဲမှ ၉၀ရာခိုင်နှုန်းကို ယင်းနိုင်ငံများသို့ တင်ပို့မည်ဖြစ်သော်လည်း ကျန်ရာခိုင်နှုန်းအတွက် မည်သို့ခွဲဝေသုံးစွဲမည်ကို မသိရှိရသည့်အပြင် ယင်းစီမံကိန်းများကြောင့် ဒေသခံများ လူမှုဒုက္ခနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများစွာ ကြုံ တွေ့နိုင်သဖြင့် စီမံကိန်းရပ်တန့်ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်း ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
KRW ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ စောသာဘိုးက “လက်မှတ်တွေကတော့ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ဖြန့်ကျက် ကောက်ယူနေတဲ့အတွက် လော လောဆယ် ဘယ်လောက်ရပြီလဲဆိုတာ မစုမိသေးဘူး။ သို့သော် ကရင်ပြည်နယ်မှာတော့ လက်မှတ်ပေါင်း ငါးသောင်း ကောက် ခံသွားဖို့ ရှိပါတယ်”ဟု ပြောဆိုသည်။
ထို့အပြင် KRW သည် ရေကာတာတည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းများ ရပ်တန့်ရေးအတွက် အခြားသော မြန်မာနိုင်ငံ မြစ်ချောင်းများ ကွန်ယက်အဖွဲ့နှင့်အတူ အတိုက်အခံပြု တိုက်ပွဲဝင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ယခု ကောက်ခံရရှိသော လက်မှတ်များကို အသုံးပြု ကာ မတ် ၁၄ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရေကာတာဆန့်ကျင်ရေးနေ့၌ လှုပ်ရှားမှုများကို လူသိရှင်ကြား ပြု လုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး မော်လမြိုင်မြို့၌လည်း ရေကာတာဆန့်ကျင်ရေး ဆုတောင်းပွဲတစ်ရပ်ကိုလည်း ကျင်းပသွားမည်ဟု KRW က ဆက်လက် ပြောဆိုသည်။
သံလွင်မြစ်ပေါ်တွင် တည်ဆောက်မည့် ရေကာတာများမှာ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကွမ်းလုံမြို့နယ်ရှိ ကွမ်းလုံရေကာတာ၊ တန့်ယမ်းမြို့နယ် ရှိ နောင်ဖာရေကာတာ၊ မိုင်းမောမြို့နယ်ရှိ မန်တောင်ရေကာတာ၊ မိုင်းပန်နှင့် မိုင်းတုံမြို့နယ်ကြားရှိ တာဆန်းရေကာတာ၊ ကယား ပြည်နယ် ဘော်လခဲမြို့နယ်ရှိ ရွာသစ်ရေကာတာနှင့် ကရင်ပြည်နယ်၊ လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်ရှိ ဟတ်ကြီးရေကာတာတို့ဖြစ်သည်။
ဟတ်ကြီးဆည်ဒေသရှိ သေးဂိမူ့ဒဲရွာသား စောသောတုထူးက “ကျနော်တို့ ဒေသခံတွေအနေနဲ့က ပြတ်ပြတ်သားသားပဲ ကန့် ကွက်ပါတယ်။ တကယ်လို့ တည်ဆောက်ဖြစ်သွား မယ်ဆိုရင်လည်း ဒေသခံတွေ အားလုံးနစ်နာမှုတွေအတွက် ဘ၀အာမခံချက် ကို အနှစ်နှစ်အလလ ဆွေစဉ်မျိုးဆက် လုပ်ပေးသွားဖို့တော့ တောင်းဆိုသွားချင်တယ်”ဟု ဆိုသည်။
လက်ရှိ ရေကာတာများ ဆောက်လုပ်ရေး ပြင်ဆင်နေစဉ် ရေကာတာအနီးတ၀ိုက်ရှိ ရေလွှမ်းမိုးနိုင်သောရွာများမှာ အတင်းအဓမ္မ ပြောင်းရွှေ့ခြင်းခံရသည့်အပြင် လယ်ယာမြေသိမ်းဆည်းမှုများ၊ သစ်တောပြုန်းတီးမှုဖြစ်ပွားပြီး ရေကြီးကာ ရပ်ရွာများ ရေလွှမ်းမိုးမှု ခံရခြင်းနှင့် ယင်းစီမံကိန်းကြောင့် စစ်ပွဲများ အကြီးအကျယ်ဖြစ်ပြီး ကြားနေလူထုများ၊ နေအိမ်များ၊ စွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရ ခြင်းများ ဖြစ်ပွားနေကြောင်းလည်း KRW က ဆိုသည်။
Karen Rivers Watch-KRW ကို ၂၀၀၃ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းကြောင့် လူမှုရေး၊ နိုင်ငံ ရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာများအပေါ် သက်ရောက်မှု တစုံတရာများရှိပါက စောင့်ကြည့်လေ့လာရင်း စည်း ရုံးလှုံ့ဆော်သွားရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကရင်လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင် ဖွဲ့စည်းထား ခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by PKD at 1:37 AM
How many dam in Burma (Myanmar), and why our people in Burma do not get enough electricity now? I do not mean about the underdeveloped places such as villages and black zones that the government said. In my opinion, dam are not the most business than disaster for our people. Please think about this!
I agree with you. We need to destroy this fuck power rapers.
65 ကြိမ်မြောက် ကရင်တော်လှန်ရေးနေ့- The Special O...